Ny 22 septambra 1899 kosa no nolalaovina tao ny teatra malagasy voalohany dia ny ZEFINE SY ARMAND nosoratan-dRajaonah Tselatra ary ny Tropy “TANANARIVE THEATRE” no nilalao azy. Opérette koa izy io, izany hoe tantara ravahana hira. Dia noraisinay FMTM “Fikambanan’ny Mpanao Teatra Malagasy” ho fiatombohan'ny Teatra teto Madagasikara io daty io, hoy i Mbato Ravaloson filohany, na dia efa nisy karazana teatra Malagasy ihany aza talohan’izany Tao amin’ny Teatra Ambatovinaky no nanandratana ny Teatra Kilasika Malagasy izay tantara ravahana hira teatraly ka ny nalaza indrindra tamin'ireo mpamoron-kira dia i Justin Rajoro, Naka Rabemanantsoa, Andrianary Ratianarivo. Nakaton'ny fanjakana frantsay tamin’ny taona 1950 vokatry ny raharahan'ny 1947 ary narodana ny taona 1953 ny Teatra Ambatovinaky. Amin'izao dia trano fidiovana (WC) no hita ao ary efa mandeha moa ny feo fa ho lasa “parking” ny hotely ampitan'io toerana io izy. Efa tamin'ny fankalazana ny faha-100 taonan'Ambatovinaky ( 1999) no nangatahana ny mba hamerenana ny Teatra Ambatovinaky amin'ny endrika ivelany fa atao Mozea d'Art izy hisarihana ny Malagasy hahafantatra bebe kokoa ny kolontsainy sy ny zavakantony, indrindra ireo mpizahatany ihany koa. Ny tantara “Kapoaka sa Vahoaka” nosoratan'i Victor Solo (1978) ary holalaovin’ity Tropy ity hialohavan’ny fampirantiana fintina hatao ao amin'ny Alliance Française Andavamamba ny zoma 20 ka hatramin'ny alahady 22 septambra toerana hilalaovana ny teatra no hanamarihana ny 22 septambra 2019.